Modafinil - Ọrịa Obere Ọgwụ na Uru Nrite Nootropic | Azu na-emepụta steroid
/blog/modafinil/Modafinil - Ọrịa Obere Ọgwụ na Uru Ntuzi
Ihe na 12 / 15 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na modafinil.
1.Gịnị bụ Smart Drugs? 2.What bụ Modafinil?
3.How Modafinil na-arụ ọrụ? 4.Modafinil Jiri na Uru
5.Modafinil Side Effects na Dosages 6.Adrafinil vs. Modafinil vs. Armodafinil
7.Ebe ịzụta Ezigbo Modafinil raw ntụ ntụ online?
|. Modafinil raw ntụ ntụ Nootropics isi agwa:
1.Gịnị bụ Ọgwụ ọjọọ ?
Ọ bụ ụmụ akwụkwọ, ndị ọchụnta ego, ndị nwe ụlọ ahịa, ndị na-eme egwuregwu, ndị na-egwu egwuregwu poker na ndị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ, na-ejizi nootropics, ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ. A na-eji ha eme ka ikike ịmụ ihe, melite ọrụ ncheta, mee ka nchebara anya na nchekwube, na ọbụna iji melite nkà nkwurịta okwu na ederede.
2.What bụ Modafinil?
Modafinil bụ ihe nchebe-ịkwalite ọgwụ analeptic nke kesara site na Cephalon Inc. ma kwadoro ya dị ka ọgwụ sitere n'aka FDA (Food and Drug Administration) na United States. Ọ bụ ezie na a nwalere ya dị ka ọgwụ iji mesoo nsogbu ụra ụfọdụ, a na-akpọ ya dịka "ọgwụ ọjọọ" nke a maara iji melite arụmọrụ nke onye isi ike na ụra na-adịghị mma.
Ị ga-ahụkwa na ọ na-ere n'okpuru aha Provigil, Sun Pharma Modalert, Alertec, Modapro, na Modiodal.
Modafinil chọtara na 1976 site na onye prọfesọ ahụike French bụ Michel Jouvet tinyere ụlọ ọrụ ọgwụ na Cephalon. Mgbe a chọpụtara na ọ na-eme ka ndị mmadụ ghara ịdị na-atụgharị uche n'ihe ọmụmụ ụmụ anụmanụ, a malitere iji ya mee ihe maka oge mbụ n'ime mmadụ dịka ọgwụgwọ maka narcolepsy na 1986.
Kemgbe ahụ, ojiji Modafinil abawanyela na ọnọdụ ndị ọzọ metụtara ụra, dịka nsogbu ụra na-arụ ọrụ na-ehi ụra na-ehi ụra na-ehi ụra na-agụ ụra na-emechi anya.
Modafinil na-ejikwa agha British na Amerịka mee ihe iji mara ka ndị agha na-amụ anya ma na-arụ ọrụ na ọkwa dị elu ruo na 40 awa n'otu oge. Nnyocha achọpụtakwala Modafinil ka ọ dị irè na mbenata ma ọ bụ iwepụ ihe nbibi nke ụra na-adịte aka na ụbụrụ.
N'ihi nke a, a na-ejikarị ya mee ihe dị ka ihe na-adịghị mma iji mee ka a na-elegharị anya karịsịa na ndị na-adịghị enweta ụra zuru ezu.
3.Otú Modafinil si arụ ọrụ ?
Ejighị ama usoro mmemme nke Modafinil na ahụ. Nnyocha e mere egosiwo na ọgwụ a nwere mmetụta dị iche iche na ntanetransite dị iche iche na ụbụrụ na usoro nhụjuanya nke gụnyere usoro Histamine, Dopamine, Epinephrine (Adrenaline), Norepinephrine (Noradrenaline), Serotonin, na Orexin (Hypocretin).
Achọpụtala Modafinil iji bulie ọkwa histamine na ọrụ locomotor na usoro nhụjuanya dị n'etiti. E gosipụtara mmetụta modafinil ka ọ na-eyipụ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na onye na-eme ihe ike na-emepụta ihe na-emetụta ihe na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe. Nke a na - egbochi ọgwụ yiri nke a na - akpọ methylphenidate, nke na - adịghị emeghachi omume n'otu ụzọ ahụ na fluoromethylhistidine, onye na - eme ihe na - emepụta histidine decarboxylase.
Modafinil, bụ isi ọrụ ọgwụ ahụ na otu aha ahụ, emebeghị nchọpụta zuru oke ruo n'ókè nke nwere ike ịkọwa ụkpụrụ niile dị na ya si arụ ọrụ. Ọtụtụ nchọpụta achọpụtawo na ọ na-arụ ọrụ site n'ịgbanwe ọkwa CNS nke histamine n'ime ahụ mmadụ.
Nnyocha a na-achịkwa na ụmụ oke gosiri na ọgwụ ahụ na-abanye n'ime usoro orexinergic. Orexin bụ peptide nke na-eme dị ka onye na-ahụ maka ntanetịnta ma na-etinye aka na ụkpụrụ nke ụra / ụra na ncheta na nlekota nche. Ihe nyocha nke na-enweghi neuron kwesịrị ekwesị emeghị ihe dị ka atụle anya, na-akọwapụta ihe dị mkpa nke orexin na usoro ndị a.
A chọpụtawo na Modafinil na-emetụta Dopamine na ụzọ mgbaàmà ya. N'ọmụmụ ihe nke na-ele ọtụtụ ụzọ dị iche iche na ndị na-adịghị ahụ maka ha, Modafinil hụrụ ka ọ na-emetụta onye na-ebugharị Dopamine, na-eme dịka onye nchikota reopụta Dopamine. Nyocha ọzọ nke na-eji nyocha PET na ndị ọrịa mmadụ chọpụtara na site na ịbanye na saịtị ndị na-ebugharị Dopamine, Modafinil mụbara ụba nke Dopamine na ụbụrụ.
4.Modafinil Jiri na Uru
E gosipụtara Modafinil iji nyere ndị mmadụ aka ịmụrụ anya ma na-arụsi ọrụ ike, yana ime ka uche ha ghọtakwuo karị ma ọ bụrụ na ha echeburu ncheta ha site na mbido ụra nke ụra.
Nnyocha emewo ka egosiputa mmekọrịta dị n'etiti iji ọgwụ a eme ihe ma nọgide na-arụ ọrụ ahụ na ọnọdụ ahụike dịka enweghị ụra. Otú ọ dị, ọ bụghị ha niile nwere ike jikọọ Modafinil ka ọganihu nke ọrụ psychomotor na-achịkwa ihe gbasara ụmụ mmadụ.
Narcolepsy, Mgbanwe Ụra-Ọrụ ụra ụra, na ụra Apnea
Narcolepsy bụ ọnọdụ na-adịghị emetụ n'ahụ nke na-emetụta njide nke edemede na ụra. Ọnọdụ ahụ na-akpata oké ụra ehihie, ọ pụkwara ime ka ndị mmadụ daa mbà ma daa ụra n'ụbọchị. A maghị kpọmkwem ihe kpatara narcolepsy, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe nwere ike ime, na njikọ siri ike na ụfọdụ mkpụrụ ndụ ihe. Akụkụ nke usoro ahụ bụ n'ihi nkwụsị nke orexin na-ahapụ ihe mgbochi na ụbụrụ.
N'ọmụmụ nchọpụta a na-ahụ maka okpukpu abụọ, ndị a na-ahụ maka mbempe, Modafinil dị ka ọgwụgwọ dị irè iji belata ụra ụtụtụ na ndị nwere narcolepsy. A na-eji nlezianya arụ ọrụ na Modafinil n'elu placebo. Achọpụtala ụra ehihie n'oge ọnwụnwa na-eji polysomnography achọpụta na Modafinil agaghị emetụta ya n'ụzọ na-ezighị ezi ma ọ bụrụ na ọ nọ n'ọnọdụ placebo.
Mgbe a kwụsịrị ịgwọ ọrịa, a hụrụ ka mgbaàmà nke narcolepsy na-alaghachi na ndị ọrịa na ọkwa ha dị elu mgbe ha na-anataghị ọgwụgwọ. E nwebeghị akụkọ banyere ndị na-emepe ihe mgbaàmà ndị na-eme ka a ghara ịchọta ihe ndị ọzọ na-akpali akpali dịka amphetamines, na ịzụlite ịdabere na ya adịghị ka ọ bụ okwu. Ihe kachasị na-emetụta ụbụrụ gbasara Modafinil maka narcolepsy bụ isi ọwụwa, ọkwa ahụ adịghịkwa ukwuu karịa ihe a na-akọ na placebo.
Ya mere, ndị nchọpụta ahụ kwubiri na Modafinil bụ nhọrọ kachasị mma maka ịhazi narcolepsy, ọ bụkwa ihe a na-edekarị maka ọgwụgwọ mbụ a. Njikere maka nsogbu ụra ndị ọzọ etolitewokwa, karịsịa ntụgharị-nsogbu ụra na-arụ ọrụ na ọrịa mberede na-egbochi iku ume / ọrịa hypopnea.
Nsogbu ụra na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ bụ ọgba aghara nke na-eme mgbe ndị mmadụ nwere ọrụ ha na-arụ ọrụ n'oge oge ụra abalị. Nke a nwere ike ịbụ ndị na-arụ ọrụ oge niile nke ọrụ dị iche iche ma ọ bụ ndị nwere usoro ntụgharị nke na-eme ka ha na-arụ ọrụ n'abalị. A na-ahụkwa nke a n'ime ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ ogologo oge, dị ka ndị dọkịta.
Dị ka narcolepsy, ndị nwere nsogbu ụra na-arụ ọrụ na-enwe oké ụra ehihie. Tụkwasị na nke a, ha nwere ike ịnwe ụra ehira mgbe ha na-anwa ịrahụ ụra n'èzí n'ehi ụra nkịtị (ọ bụ n'oge ehihie). Ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ike ịlaghachi n'ụdị ezumike nkịtị karịa ihe mgbaàmà ga-edozi onwe ha, ma nke a abụghị nhọrọ maka ọtụtụ ndị mmadụ.
Na otu nnyocha, e nyere ndị nwere ọrịa ụra na-arụ ọrụ ma ọ bụ 200 mg nke Modafinil ma ọ bụ placebo tupu ha agbanwe. A hụrụ ndị ọrịa a na-emeso Modafinil ka ha belata oge na ogologo oge nlebara anya mgbe a nwalere ha n'ule elekere anya. A na-ahụkwa mmụgharị dị nwayọ na njakịrị maka oge ụra.
Otú ọ dị n'agbanyeghị mgbanwe ndị a, ndị ọrịa nọgidere na-enwe oké ụra na mmebi iwu n'abalị. Ndị nchọpụta ekwuola na n'ihi ụra a na-edozi ahụ nke ka na-eme na mmepe nke ọgwụgwọ ndị dị irè karị dị mkpa.
Mmetụta ụra nke mberede / ọrịa hypopnea (OSAHS) bụ nsogbu nwere ike ịda mbà mgbe ọkpụkpụ na-akwado ire na okwu dị nro na ọnụ na-eme ka ahụ dị jụụ ma ọ bụ kpam kpam. Apnea na-ezo aka n'ogo oge nchịkọta na enweghị nku ume, ebe hypopnea na-ezo aka na ume ma ọ bụ nke na-emighị emetụta nke na-eme ka ọ ghara igbochi ikuku ụgbọelu.
Mgbaàmà nke ụra na-ehi ụra na-agụnye ụda oké ụda, oge nkwụsị iku ume mgbe ị na-ehi ụra, na-eteta mkpuchi, na-akpọte ọnụ na akwara na akpịrị akpịrị, isi ụfụ ụtụtụ, na oké ụra ehihie.
Ya mere, a na-eji modafinil eme ihe mgbe ụfọdụ dị ka usoro ọgwụgwọ maka ịgwọ ọrịa mgbaàmà. Ojiji ya abụghị iji nwalee ọrịa ahụ, kama iji mee ka ụra ụra nke ehihie na-emekarị ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ihe ndị na-ehi ụra na-ebute n'abalị. Nnyocha nyocha a na-ejikwa okpukpu abụọ na-achịkwa egosiwo na Modafinil na-eme ka ọ dịkwuo ụra ehihie ma e jiri ya tụnyere placebo.
Ahụhụ na-erughị ala & Ntị - Nsogbu Hyperactivity na-adịghị mma
Otu n'ime ihe eji eme ihe na-emekarị nke Modafinil bụ maka Ọrịa Ntị Ntị (ADD) na nsogbu Hyperactivity (ADHD). Ọtụtụ ndị na-eji Modafinil maka ọnọdụ ndị a n'ihi mmetụta na-akpali akpali ọ nwere. Ọtụtụ nchịkọta akụkọ nyocha nke ndị ọrụ na-eji Modafinil maka ADHD enyere ha aka ịnọgide na-akpali ma na-elekwasị anya na ọrụ dị n'aka.
Nyocha ndị ọzọ na-ekwukwa na Modafinil anaghị eji ụfọdụ ọgwụ ọjọọ eme ihe dịka Adderall, Ritalin, dextroamphetamine, na dexmethylphenidate.
Nnyocha ọmụmụ ihe otutu ejiriwo Modafinil mee ihe iji jikwa ADHD na ndị okenye. Ụfọdụ nnyocha jiri Modafinil tụnyere ebebo, ebe ndị ọzọ na-eji Modafinil na ọgwụ ndị a na-etinye na placebo.
Otu nnyocha gosiri na Modafinil bara uru ma e jiri ya tụnyere ọgwụ dextroamphetamine. A hụrụ ndị ọrịa nke na-ahụ maka ọgwụ ndị ahụ ka ha nwekwuo ọganihu dị elu na DSM-IV ADHD Checklist mgbe e jiri ya tụnyere placebo. Ndị nnyocha ahụ kwubiri na mkpụrụ ọgwụ Modafinil bụ ihe ọzọ nwere ike ịhọrọ maka ọgwụ ndị na-akpali akpali na ndị okenye na ADHD.
Nchọpụta ọmụmụ abụọ na-ekpuchi anya, nke a na-ahụkarị, na-achọpụta na Modafinil dose ọgwụ 200 enwere ike ịmalite ịmalite inwe mmụba n'ime ndị ọrịa na ADHD ma e jiri ya tụnyere ndị ọrịa. Ndị nnyocha ahụ kwubiri na Modafinil nwere ikike dịka usoro ọgwụgwọ ọzọ maka ADHD ma e jiri ya tụnyere omenala ndị na-akpali akpali.
A naghị akwado Modafinil n'ime ụmụ maka ADHD n'oge a. Nnyocha e mere site na iji ụdị ọgwụ dị elu nke Modafinil kpọrọ Sparlon na ụmụ nwere ADHD gafere na ụfọdụ nsogbu dị njọ na-adịghị mma na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị so na ya.
Ọrịa Stevens-Johnson bụ ọrịa siri ike ma dị njọ nke anụ ahụ na akpụkpọ anụ mucous. Ihe kachasị na-egosi na ahụ ọkụ, ike ọgwụgwụ, ihe mgbu anụ ahụ, ihe na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ odo odo na-agbasa, ma na-egbuke egbuke na mucous membranes nke ọnụ, imi, anya, na akụkụ ahụ.
Ọmụmụ ihe otutu ebe ọ bụ na oge ahụ egosila na nrụpụta ọrụ na nchekwa nke Modafinil na-eji ụmụaka maka ADHD, Otú ọ dị, a gaghị anabata ya maka iji ya na ìgwè a. Tụkwasị na nke a, FDA adịghị akwado Modafinil ugbu a dịka ọgwụ iji na-emeso ADD ma ọ bụ ADHD na ndị okenye, na ọ dị mkpa ka a chọkwuo nnyocha iji chọpụta mmetụta zuru oke na nsogbu ndị a.
Mgbaàmà nke ike ọgwụgwụ na ịda mbà n'obi na ọtụtụ sclerosis (MS)
Otu n'ime ihe mgbaàmà kachasị emetụta bụ ịda mbà n'obi bụ ike ọgwụgwụ. Ọbụna na ndị ọrịa ndị a na-emeso ndị na-agwọ ọrịa dịka ndị na-eme ihe nchịkwa dịka ndị na-eme ihe nchịkwa Serotonin Reuptake (SSRIs) ma nwee mmelite na mgbaàmà ndị ọzọ metụtara ịda mbà n'obi, ike ọgwụgwụ na ụra oké ụra ka nwere ike ịnọgide.
Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ ndị ọrịa anaghị anabata ya nakwa na ha chọrọ ọgwụ ndị a na-eji agwọ ọrịa, a hụkwara ụdị ndị ahụ na-agwọ ọrịa na Modafinil ọrụ na ụfọdụ.
Ọmụmụ ihe a na-eduzi ebe a na-ahụ maka ihu abụọ na-ele Modafinil augmentation na ndị ọrịa nwere ike ọgwụgwụ na ihi ụra bụ ndị na-anabataghị ọgwụgwọ SSRI omenala maka ịda mbà n'obi. N'ime nchọpụta dị iche iche dị iche iche ma yiri nke ahụ, a na-eji Modafinil eme ihe dịka ọgwụgwọ ndị na-agwọ ọrịa SSRI na ndị ọrịa bụ ndị na-anabata mmadụ ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị SSRI naanị.
N'ime ọnwụnwa atọ a, a hụrụ Modafinil iji mee ka ndị ọrịa dịkwuo ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ihi ụra na obere oge (ihe na-erughị izu 6). Ndị nnyocha ahụ kwubiri na Modafinil nwere ike ịbụ ọgwụgwọ bara uru maka ụfọdụ ndị nwere ịda mbà n'obi, karịsịa ndị enwere ike ọgwụgwụ.
Dị ka ndị ọrịa na-enwe ịda mbà n'obi, otu n'ime mgbaàmà kachasị emetụta ndị Multiple Sclerosis bụ ike ọgwụgwụ. Achọbeghị nnyocha ndị dị ntakịrị na ndị ọrịa nwere ọnọdụ a, n'agbanyeghị nke a, ihe emerela bụ nkwa.
Otu nnyocha bụ otu onye kpuru ìsì, nke 2, nchọpụta etiti abụọ nke jiri Modafinil tụnyere placebo iji meziwanye ike ọgwụgwụ na ndị ọrịa na MS. E nyere ndị ọrịa ahụ ohere maka izu 1-2, mgbe ahụ, 200 mg Modafinil ọgwụ maka izu 3-4, 400 mg Modafinil ọgwụ maka izu 5-6, wee tinye ebe ọzọ maka izu 7-9.
Ndị nchọpụta ahụ amaghị ịgwọ ọrịa iji hụ na nchekwa nke ndị so na ya. Iji hụ na esighị arụmụka, arụpụtara ọgwụgwọ nke ọma na-eji njiri onwe onye nyocha, nyocha kachasị bụ Fatigue Severity Scale (FSS).
Echọtara na ike ọgwụgwụ na ụra ehihie ka mma site na iji MNNUMX mg dose Modafinil, ma e jiri ya tụnyere ma ọ bụ 200 mg mg Modafinil dose na placebo. Ndị nnyocha ahụ kwuru na ọ bụ ihe mere na usoro 400 mg nke dị elu adịghị eme ka mmezi ahụ dị na 400 mg dosage, na-ekwubi na ọ nwere ike ịbụ n'ihi nkwụsị ma ọ bụ mmebi ahụ nwere ike ime ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ga-ekwe omume na ike ọgwụgwụ.
N'ozuzu, ndị nchọpụta ahụ kwubiri na Modafinil nwere ike ịbụ ọgwụgwọ dị mma ma dị irè maka iwusi ike na ụra na ndị mmadụ na MS.
Ọdịdị Nchọpụta Nchọpụta Nootropic
Ụfọdụ n'ime njirimara na-emekarị ka ọ bụrụ na Modafinil na-eji ọgwụ ahụ eme ihe dị ka ọgwụ nootropic maka mmelite uche. Ndị dị iche iche site na ụmụ akwụkwọ mahadum na Wall Street ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa na-eji Modafinil eme ka ncheta, mmụta, anya, na oge nlebara anya.
Otu nnyocha nyochaa nke nyochare ihe nchọpụta nke nchọpụta nchọpụta gara aga chọpụtara na Modafinil na-egosi na ọganihu na-arụ ọrụ na episodic memory mgbe eji ya.
Nyocha ọzọ kwubiri na Modafinil na-eme ka ọrụ nlekọta na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, karịsịa mgbe ị na-eme atụmatụ ma na-arụ ọrụ dị ike na mgbagwoju anya.
Otu mmadụ abụọ na-ahụ maka nchọpụta ọmụmụ na-enyocha mmetụta mmụba nwere ike imepụta Modafinil nwere n'ahụ ụmụ nwoke tozuru okè.
Echọtara na Modafinil na-eji mmemme nke ndị na-arụ ọrụ dị iche iche mee ihe nyocha dịgasị iche iche nke na-agụnye ọdịdị ihe ngosi, nhazi atụmatụ, na nchọpụta nkwụsị. N'aka nke ọzọ, a na-ebelata nzaghachi ụfọdụ ule, na-atụ aro na Modafinil nwere ike inye aka gbochie impulsivity ma melite nzaghachi ya.
N'otu aka ahụ na ndị ọrụ nyocha na achọtara na forums nootropic, ndị na-ekere òkè n'ọmụmụ ihe a na-akọ na ọ dịkwuo anya ma na-aṅa ntị na Modafinil, na inwewanye ume ike.
Achọkwuru nyocha na mpaghara a iji chọpụta oke mmetụta Modafinil nwere ike ịnwe n'ahụ ndị nwere ahụike iji melite ikike ime uche.
5.Modafinil Side Effects na Dosages
A na-ele modafinil anya dịka nchekwa n'enweghị mmetụta ndị dị ize ndụ mgbe ejiri ya dị ka a gwara ya. Enwere ụfọdụ mmetụta Modafinil dị nwayọọ nke ị ga-ahụ n'oge a na-eji ya eme ihe.
Site na nlezianya nyocha banyere ọgwụ ọjọọ ahụ, ndị nchọpụta ekpebiwo ihe na - esonụ nke nsogbu ọjọọ ndị Modafinil nwere ike ịkpata:
Rhinitis (mbufụt nke mucosa nasal)
Ọnwụ dị arọ
Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ ma dị oke njọ nke Modafinil dị iche iche akpụkpọ anụ na mmeghachi omume dị iche iche, tinyere ọrịa ọrịa Stevens-Johnson nke a kpọtụrụ aha, mmeghachi omume ọgwụ ọjọọ na eosinophilia na usoro ihe mgbaàmà (DRESS), na Epidemmal Necrolysis (TEN).
Ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla n'ime mmetụta ndị a mgbe ị na-eji ọgwụ Modafinil, ị ga-ahụ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-enye ọgwụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ngwaahịa ahụ ike, jụọ dọkịta gị ka o nye gị ọgwụ ma ọ bụ nyochaa ma ị ruru eru ịzụta Modafinil n'Ịntanet n'enyeghị ọgwụ.
Mgbe a na-eji ya eme ihe, a na-ede Modafinil n'usoro 200 mg kwa ụbọchị. Mgbe ụfọdụ, a na-eji usoro 100 dị ala kwa ụbọchị iji malite, mgbe ahụ, a na-amụba usoro ọgwụgwọ na 200 mg na nke nta nke nta na ndị ọ bụla nwere ike ịdị na-echebara oke zuru ezu iji malite.
Enweghị usoro eji akwadoro maka Modafinil maka iji aha-eji. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-agbaso usoro ọgwụgwọ ndị yiri ya ka ha mee ihe n'usoro ọgwụ, dịka na 200 mg kwa ụbọchị.
Ọ bụ ihe dị mma ịgụ Modafinil nyocha na ahụmahụ ndị ọrụ tupu gị ebute usoro ọgwụ mbụ gị ka ị mara kpọmkwem otú ọgwụ a nwere ike isi metụta gị.
Adrafinil bụ onyinye dị nnọọ ka Modafinil na nhazi na ojiji. Ogige abụọ ahụ yiri nnọọ ihe owuwu; naanị otu ihe dị iche na-eme ka Modafinil ghara inwe otu hydroxyl amide nke Adrafinil nwere.
Adrafinil na-arụ ọrụ dịka ụda nke Modafinil. Nke a pụtara na ọ na-agbanwe na Modafinil na ahụ, ma na-emekwa ihe yiri nke ahụ. Adrafinil achọpụtarala afọ abụọ tupu Modafinil na 1974 site na otu ụlọ ọrụ ọgwụ na mbụ chọpụtara Modafinil.
N'ihi na ọ dị mkpa ka a gbanwee ya n'ime Modafinil n'ime ahụ, Adrafinil adịghị dị ka Modafinil. Ọ bụghị niile Adrafinil na ọgwụ ọgwụ a ga-agbanwe n'ime Modafinil, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị a gbanwere n'ime acid modafinilic anaghị arụ ọrụ.
Modafinil bụ 1: 1 nchikota nke ndị nkuzi abụọ, R-Modafinil na S-Modafinil. Enantiomers na-enyo ihe osise nke otu onyinye ahụ; n'ihi ya, ha nwere otu ihe ahụ dị na ngwongwo, ọ bụ naanị ụdị dị iche iche.
Na ya n'onwe ya, a na-akpọ R enantiomer nke Modafinil dị ka Armodafinil. Dị ka ọgwụ, a na-eji Armodrafinil mee ihe maka otu nzube ndị dị ka Modafinil, ya bụ imeziwanye anya na ndị nwere ụra ụra na oké ụra. Ọkara ndụ Armodafinil dị ogologo karịa Modafinil, nke nwere ike ime ka ọ dịkwuo irè n'ọnọdụ ụfọdụ.
Aha a kacha mara amara nke Armodafinil bụ Nuvigil, nke ụlọ ọrụ Cephalon na-emepụta, nke na-ewetakwa ụdị ụdị aha Modafinil - Provigil.
7.Wa ebe zụta Ezigbo Modafinil raw ntụ ntụ ?
Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ebe Modafinil ntụ ntụ dị na weebụ, ma ọ siri ike ịzụta Ezigbo Modafinil raw online. E nwere ọtụtụ ebe na-ere ngwaahịa ụgha na ahịa. ya mere mgbe ịzụrụ Modafinil raw material online, ịkwesịrị ịhọrọ otu ezigbo ala.
Nkowa ndi ozo di mkpa,Nabata ebe a.
Anavar bụ otu n'ime steroid kachasị mma nke ndị ikom na ndị inyom	Esi mee ka levitra dị irè karị